Iphupha ngeSpacehip ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Oosomajukujuku bavumela abantu ukuba bathathe uhambo baya emajukujukwini okanye kwezinye iiplanethi ezinjengeNeptune, apho banokuphanda khona kwaye basebenze. Kwangelo xesha, bakwadlala indima kwiifilimu ezininzi eziyintsomi, umzekelo kuthotho olunje ngeStar Trek okanye uthotho lwefilimu i-Star Wars. Uhambo lwasemajukujukwini lutyibilika apha ngesantya sokukhanya esiya kwiiplanethi ezikude, maxa wambi lide libhabhe kumngxuma wombungu, abathi bawungene kumanqwanqwa angaziwayo.
Kodwa kunokuthetha ntoni xa ishatile okanye isiphekepheke sivela emaphupheni ethu, sinokuzifumana sikunye kwaye sihambe siye emajukujukwini? Isiphekepheke sichazwa njani njengomfuziselo wephupha?
Fumana ngakumbi malunga nokutolika iphupha lakho malunga nesiphekepheke esingezantsi. Apha uya kufumana awona maphupha aqhelekileyo kunye notoliko olwahlukeneyo olunokwenzeka:
1 Isimboli yamaphupha «Uthubeleza emajukujukwini» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ingqalelo! Ukuphahlazeka kwesithuba sasemanzini kwilizwe lamaphupha!
1.2 Ukufika emajukujukwini- Kutheni ndiphupha ngale nto?
2 Uphawu lwephupha «isiphekepheke» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «isiphekepheke» - ukutolika kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «isiphekepheke» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha «Uthubeleza emajukujukwini» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ingqalelo! Ukuphahlazeka kwesithuba sasemanzini kwilizwe lamaphupha!
Isiphekepheke yengozi ephupheni kwaye umntu uyazibuza ukuba inokuba yintoni intsingiselo yayo. Ukungqubana kwesiphekepheke kubonakalisa ukulahleka komgca ocacileyo wokuqhelaniswa el mundo ngokwenene. Isizathu soku kunokwenzeka kukungazithembi, okuhlasela amaphupha. Kuya kufuneka ukuba uzibuze ukuba ingaba amathandabuzo afanelekile.
Ukufika emajukujukwini- Kutheni ndiphupha ngale nto?
Ukufika kwesiphekepheke emaphupheni ethu kunokuchazwa njengophawu oluqinisekileyo lwamaphupha. Emva kwale inyani yokuba inqanaba lobomi ebelibonakaliswa bubulolo, ubunzima kunye nokusilela kozinzo ebomini liyaphela.
Uphawu lwephupha «isiphekepheke» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na obona isiphekepheke sihamba sodwa esithubeni ephupheni, ngokutolikwa ngokubanzi kwesimboli yephupha, ngokunokwenzeka kwisigaba se u lonwabo. Umntu ekuthethwa ngaye angakufumana kunzima ukufumana indlela yakhe kubomi babo bemihla ngemihla kwaye esiya esiba kude noontanga bakhe.
Kwangelo xesha, kunokuba nokunqongophala kwenkxaso kunye uqhelaniso ebomini. Usenokungazi ukuba yeyiphi indlela osele uhambe ngayo okanye yeyiphi indlela ekufuneka behambe ngayo ngoku.
Kubalulekile ukuthatha uphawu lwephupha ngokungathí sina kwaye usebenze kwiingxaki zakho, ukufikelela kwabanye abantu kwakhona, kwaye wenze iinjongo ezicacileyo. Ukuba uyawamkela lo mqobo, amaphupha aya kufumana indlela yawo ebuyela kwindlela yesiqhelo yemihla ngemihla.
Amaphupha apho iqela elinomdla lihamba njengosomajukujuku kwisiphekepheke esithubeni litolikwa ngokuqinisekileyo: oku kunokuba kukoyisa isigaba esinzima sobomi Ukubonisa.
Ngokunokwenzeka iphupha laviwa ebomini bakho bokwenyani yimeko ethile okanye ngomnye umntu ocinezelweyo kunye nothintelweyo. Nangona kunjalo, ngoku kunokwenzeka kakhulu ukuba uya kuba nakho ukukuyeka oku kwaye ufumane imvakalelo entsha yenkululeko kunye nenkululeko. Ngendlela efanayo, nabani na osephupheni njengelungu labasebenzi abangena kwisiphekepheke banokuphumelela ngempumelelo kwiingxaki zemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha «isiphekepheke» - ukutolika kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yophawu lwephupha, isiphekepheke sinokuba sisitshixo sokoyisa imiqobo ebonakalayo. Iphupha livakalelwa ngakumbi nangakumbi ngamanqanaba alo Intsingiselo ecaleni kwaye ufunde ukufikelela kuyo.
Kwangelo xesha, ujongana nokubonakala kwengqondo yakho kwaye ujonge indlela oyijonga ngayo imeko-bume yakho kweli nqanaba. Kananjalo, ngokutsho kwabanye babahlalutyi bengqondo, iingcinga zezinto ezingaphathekiyo okanye ezinokuchazeka kwimeko yendalo ephupheni, umzekelo, cinga ngoThixo, inkolo okanye amaxabiso athile kunye nokuchaza indlela oziva ngayo ngayo.
Kuphela ukuba liphupha elingalunganga elinokuthi libenendawo yokulumkisa: isithuthi sendawo esibangela uloyiko ephupheni sinokuba sisalathiso Ithagethi- y Ukudideka kubomi bakho.
Uphawu lwephupha «isiphekepheke» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, isiphekepheke sifanekisela esakho ephupheni. ukufuna ngokomoya kwaye uzama, kodwa kananjalo ukungoyiki kunye nesibindi.